गजलकार टक गुरुङको गजल संग्रह अनाहतको विमोचन::KhojOnline.com
गजलकार टक गुरुङको गजल संग्रह अनाहतको विमोचन
भाद्र ०९, काठमाडौं । गजलकार टक गुरुङको गजल संग्रह अनाहतको विमोचन भएको छ । बहर बहार समूहले आयोजना गरेको एक समारोहमा गजलकार प्रा.डा. घनश्याम न्यौपाने परिश्रमीसंगै आवाज शर्मा, करुण थापा, नारायण गैरे, लालकाजी श्रेष्ठ लगायतका श्रष्टाहरुले यो पुस्तकको विमोचन गर्नुभएको हो । ६० वटा गजलहरु संग्रहित यो संग्रहमा नारायण घिमिरेले भूमिका लेख्नुभएको छ । लालकाजी श्रेष्ठको सभाध्यक्षतामा सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि प्रा.डा. घनश्याम न्यौपाने परिश्रमीले टक गुरुङ गजलभित्र बहरको राम्रो अभ्यास भएको भन्दै प्रशंंसा गर्नुभयो । नेपाली गजलको इतिहासमा बहरको महत्व र यसको लागि बहर बहार समूहले गरेको मिहिनेतको चर्चा गर्नुभयो ।
पुस्तकको समीक्षा गर्दै गजलकार आवाज शर्माले यो पुस्तक नेपाली गजल क्षेत्रमा एउटा मानक भएको दाबी गर्नुभयो । नेपाल उर्दु साहित्य एकेडेमीका अध्यक्ष मोमिन खाँनले नेपालमा बहरमा गजलहरु लेखिनुले एउटा छुट्टै इतिहास रचेको बताउँदै यसले संस्कृति, रिवाज र परम्पराको आपसी आदानप्रदानमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको चर्चा गर्नुभयो । कार्यक्रममा अन्य अतिथिहरु ……… ले पनि अनाहत गजलसंग्रहबारे आफ्नो विचार राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै लेखक टक गुरुङले आफू गजलको विद्यार्थी मात्रै भएको र सिक्ने क्रममै रहेको बताउनुभयो । तनहुँ घर हुनुभएका टक गुरुङ लामो समयदेखि युएईमा बस्दै आउनुभएको छ । अनाहत गजलसंग्रह बुलबुल पब्लिकेशनले बजारमा ल्याएको हो । यसको मूल्य रु. १५० तोकिएको छ । पुस्तक बजारमा सर्वत्र उपलब्ध भएको पब्लिकेशनले बताएको छ ।